Fampahalalana momba ny fanavaozana iWork sy iLife ho an'ny iPad (I) | Vaovao IPhone
Ny fampahalalana rehetra momba ny fanavaozana ny iWork sy iLife ho an'ny fitaovantsika (I)
Ny fehezan-teny Apple notarihin'i Tim Cook dia nifarana minitra vitsy lasa izay. Betsaka ny fampahalalana hamafazana an'ity keynote ity izay nanehoana zavatra maro mifandraika amin'ny tontolon'ny teknolojia: Mac vaovao, iPad vaovao (mazava ho azy), kojakoja vaovao ho an'ny fitaovantsika sy fanavaozana mahaliana amin'ny rindrambaiko Apple.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hamakafaka ny fanatsarana rehetra sy ny fiasa vaovao mifandraika amin'ny suite iWork: Pejy, Nomery ary Keynote; ary mazava ho azy, iLife: Garageband, iPhoto ary iMovie ... Te hahafantatra ny antsipiriany rehetra ve ianao? Amin'ity lahatsoratra voalohany ity dia ho hitantsika ny endri-javatra faran'izay mangatsiaka indrindra amin'ny iWork raha amin'ny lahatsoratra manaraka dia ho hitantsika ireo an'ny iLife.
1 iWork: Fanavaozana feno amin'ny Mac sy iOS
2 Fahafahana, vidiny ... Mikorontana inona, sa?
iWork: Fanavaozana feno amin'ny Mac sy iOS
Manomboka amin'ny firesahana ny momba ilay mpanodin-teny ao amin'ny Apple.
iOS: Apple dia nanavao ny fampiharana azy manontolo ho an'ny iPad miaraka amina endrika vaovao tena mifanaraka amin'ny estetika ao amin'ny iOS 7. Ankehitriny dia fotsy ny ao ambadika ary ny litera rehetra izay avy amin'ny menus sy ny hafa (avy amin'ny programa mihitsy) dia nanjary voasary araka ny ny kisary efa fantany miaraka amin'ny gradient orange, izay nasehonay anao andro vitsivitsy lasa izay, tao amin'ny iPad News.
Mac: Mikasika ny rafitra fiasan'ny Mac, OS X Mavericks, Apple koa dia nanapa-kevitra ny hanavao ny programa. Sarotra kokoa ny pejy ao amin'ny Mac ary misy endri-javatra maro hafa. Eo amin'ny ilany havia dia manana index an'ireo pejy voasoratra izahay ary eo ankavanana dia manana takelaka iray izay mampiseho aminay ireo zavatra azonay ovaina rehefa mifantina singa iray amin'ilay rakitra soratantsika. Ny endriny dia mbola mitovitovy ihany saingy mendri-piderana.
Manohy ny programa / fampiharana izahay hamoronana takelaka:
iOS: Toy ny pejy, Nomery, ny fampiharana amin'ny famoronana takelaka, dia nohavaozina miaraka amin'ny fanavaozana ny rindranasa iray manontolo. Ankehitriny, eo an-tampony dia ahitantsika ireo takelaka misokatra amin'ny endrika takelaka. Manomboka izao, afaka mamorona sary mihetsika tsy mampino isika miaraka amin'ireo sary mifanerasera izay azontsika ampidirina ao amin'ny antotan-taratasinay miaraka amin'ny fampiharana Nomera sy iWork. Amin'ny fikitika tokana dia azontsika atao ny mampiroborobo ny kisary na lasa kely kokoa rehefa mihetsika manodidina ny efijery izy ireo.
Mac: Mitovy amin'ny pejy amin'ny Mac, Apple dia nanapa-kevitra ny hametraka sidebar ankavanana izay hanana ny safidy rehetra azontsika ovaina avy amin'ireo singa hita ao amin'ny takelaka. Ho fanampin'ity famolavolana vaovao ity, ny Big Apple dia nanavao ny iWork tamin'ny alàlan'ny fampidirana modely vaovao hahagaga ny namantsika, ny mpanjifantsika na ny lehibentsika.
Farany fa tsy farany, misy Keynote, ny fampiharana hamoronana fampisehoana (ny tiako indrindra amin'ny iWork rehetra):
iOS: Lohahevitra 30 vaovao no nampidirina tao amin'ity kinova Keynote vaovao ity izay mandrafitra ny programa farany ao amin'ny suite iWork. Amin'ny Keynote dia afaka mamorona fampisehoana mahatalanjona isika miaraka amin'ny vokatra vaovao izay nampidirina toy ny: "Afomanga". Ho fanampin'izay, nasiana endrika vaovao mendri-piderana kokoa, mamela ny sisan'ny kinova taloha. Io no fampiharana iWork tiako indrindra.
Mac: Manaraka ny firafitr'ireo programa teo aloha izay mandrafitra iWork ho an'ny Mac. Eo amin'ny ilany havia dia ahitantsika ireo sary mihetsika raha eo amin'ny ilany havia kosa no ahitantsika ny safidin'ireo singa voafantina. Azontsika atao ny mamorona tetezamita tsy mampino sy natao ho an'ny tena manokana ankoatry ny fampiasàna ireo lohahevitra vaovao hahavariana ny mpanatrika ka mitehaka ry zareo amin'ny faran'ny fampisehoana.
Fahafahana, vidiny ... Mikorontana inona, sa?
Ho an'ireo fitaovana novidiana taorian'ny 1 septambra
Ny rindranasa / programa rehetra mandrafitra ny iWork dia ho maimaim-poana amin'ny iDevices rehetra miaraka amin'ny iOS 7 sy amin'ny OS X Mavericks.
Ho an'ny fitaovana hafa rehetra
Amin'izao fotoana izao dia mbola tsy nilaza na inona na inona momba azy i Apple, saingy heverina fa ny sisa amin'ireo fitaovana dia tsy maintsy mividy ny rindranasa isika na amin'ny Mac na amin'ny iDevice. Fiasco inona, sa?
Fanazavana fanampiny - Ny hetsika Apple dia azo jerena amin'ny streaming avy amin'ny Apple TV
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Ny fampahalalana rehetra momba ny fanavaozana ny iWork sy iLife ho an'ny fitaovantsika (I)
Otto Ponce dia hoy izy:
Mazava ho azy fa fiasco lehibe io. Izy ireo dia mety ho fanavaozana tsara ho an'ny fampiharana tena tsara, saingy ny zavatra nataon'i Apple dia malahelo ireo mpanjifany mahatoky rehetra (taona maro lasa izay). Tokony ho tadidin'izy ireo ireo mpanjifany izay, tato anatin'ny taona vitsivitsy, nitaona antsika ho orinasa izay izy (amin'ny vola, mazava ho azy).
Valiny tamin'i Otto Ponce
Tsy afaka manaraka ny hetsika Apple ve ianao? Fintinoinay amin'ny fotoana kintana izy io
Fetsy: Ahoana ny fijanonana amin'ny fitendrena mozika amin'ny iPhone rehefa matory ianao